Qaadkii laga keeni jiray dalka Kenya oo gabi ahaanba la joojiyay | RUUG-CADDAA
Kadib markii ay magaalada Muqdisho kula hadleen warbaahinta ganacsada Qaadka ayaa sheegay inay maanta laga bilaabo joojiyeen Qaadkii ay ka keeni jireen gabi ahaanba dalka Kenya.
Guddoomiyaha guddiga ganacsatada Qaadleyda Soomaaliyeed Qooje Maxamuud oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay go’aankasi qaateen kadib go’aankii dowladda Soomaaliya, islamarkaana ay taageersan yihiin qaranka Soomaaliya.
“Laga bilaabo maanta waan joojinay qaadkii inooga imaan jiray Kenya, waxaana ka dooranay difaaca qarankeena, badeena & dhulkeena, wixii intaasi dheer oo Siyaasad ah waxaan u dhaafnay Dowladda Somaliya, qaadkana waxaan ka keensaneynaa dalka Itoobiya oo Suuqeenii aan u wareejinay.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Guddiga Ganacsatada Qaadleyda Soomaaliyeed.
Waa go’aan la fileysan karay balse marka la eego qoraalkii jawaabta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya lama fileyn in go’aanadaan oo kale ay soo bixi doonaan.
Somalia waxaa Kenya ay maalin walbaa ka keeni jirtay Qaad aad u badan waxaana lagu qiyaasaa lacagta maalin walbaa Kenya ay Khaadka ku badalan jirtay ku dhawaad 400 Kun oo doolar.
Ethiopia ayaa hadda heleysa fursad ay lumiyeen ganacsatada Qaadka ee Kenya.
« Khaatumo Khiyaanadii Reerka Lagu Khalday Bay Qolo Wadwadaa!!
Barnaamij ay inoo wadaan Igarre iyo Ansal, waana mid xambaarsan Maahmaahyo sadexleey ah »